Semalt: Mozenda डाटा एक्स्ट्रैक्टर - उत्तम र भरपर्दो उपकरण
मोजेंडा एक व्यापक वेब स्क्र्यापिंग सेवा हो; यो राम्रोसँग यसको उपयोगी सुविधाहरू र एक पटकमा धेरै कार्यहरू गर्ने क्षमताका लागि परिचित छ। यो सफ्टवेयरले तपाईंलाई सामग्री Aliexpress.com, Boohoo.com, Amazon, र eBay बाट स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं फाईलहरू ड्रपबक्स र गुगल ड्राईवमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ, वा यसलाई तपाईंको हार्ड डिस्कमा सिधा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
Mozenda कसरी काम गर्छ?
मोजेंडा निम्न कार्यहरू अनुसार आफ्नो कार्यहरू गर्दछ:
१. यसले बहु साइटहरूबाट डाटा निकाल्दछ। पहिले, मोजन्डा डाटा ढाँचाहरूको पहिचान गर्दछ।
२. अर्को चरणमा, यसले डाटासेटहरू संयोजन गर्दछ।
Third. तेस्रो, मोजेन्डाले दुई मुख्य क्लाउड भण्डारण सेवाहरूमा परिणामहरू अपलोड गर्दछ: ड्रपबक्स र AWS।
मोजेन्डा वेब कन्सोल र एजेन्ट बिल्डर
१. मोजेन्डा वेब कन्सोल - यो वेब अनुप्रयोगले हामीलाई हाम्रो एजेन्टहरू चलाउनका लागि अनुमति दिन्छ (स्क्र्याप प्रोजेक्टहरू)। हामी परिणामहरू हेर्न र व्यवस्थित गर्न सक्दछौं र निकालाइएको डाटा CSV र JSON मा निर्यात गर्न सक्छौं।
२. एजेन्ट बिल्डर - यो एक विन्डोज अनुप्रयोग हो जुन एकै समयमा धेरै डाटा निकाल्ने परियोजनाहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछ।
Mozenda का सबै विशिष्ट सुविधाहरू:
१. सबै-मा-एक सफ्टवेयर:
मोजेन्डा यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेसका लागि राम्रो चिनिन्छ। यो वेब एक्स्ट्र्याक्टर मात्र हैन क्रॉलर पनि हो; यो सफ्टवेयरले तपाईको वेब पृष्ठहरु लाई क्रॉल गर्न बिभिन्न बोटहरु प्रयोग गर्दछ। यो कहिले पनी प्रतिबन्धित वेबसाइटहरुबाट डेटा निकाल्न सक्छ, र तपाईं मात्र यूआरएल हाइलाइट गर्न को लागी यसलाई तुरन्त को स्क्रैप गर्न को लागी। साथै, यसले स्प्याम सुरक्षा प्रदान गर्दछ र तपाईंको सामग्रीमा सबै साना त्रुटिहरू फिक्स गर्दछ।
२. सानो आकारको व्यवसायका लागि उपयुक्त:
एक स्टार्टअपको रूपमा, तपाईलाई मूल्यवान डाटा स्क्र्रापर्स वा वेब क्रलरहरूमा लगानी गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यद्यपि, मोजेन्डा नि: शुल्क सफ्टवेयर हो जसले अत्यधिक डरलाग्दो कार्यहरू सुविधाका साथ गर्न सक्दछ। यसले वेब कागजातहरूको विश्लेषण गर्दछ, प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा जानकारी सlects्कलन गर्दछ, भर्खरको प्रवृत्तिहरू, उदीयमान बजारहरू, र तपाईंलाई मिनेटको मामलामा इच्छित परिणामहरू दिन्छ। मोजेन्डा फ्रिल्यान्सरहरू र सानो आकारका व्यवसायहरूका लागि राम्रो हो र तपाईंलाई कोडि or वा प्रोग्रामिंग सीपहरू लिन आवश्यक पर्दैन।
Entire. सम्पूर्ण वेबसाइट खोल्नुहोस्:
यदि तपाईं सम्पूर्ण वेबसाइटलाई स्क्र्याप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, मोजेनदा तपाईंको लागि सही विकल्प हो। अन्वेषकहरूले आफ्नो प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न पत्रिका र ई-पुस्तकहरूबाट जानकारी लिन आवश्यक छ। यस उपकरणले गुणात्मक र मात्रात्मक डेटा राम्रो तरीकाले स helps्कलन गर्न मद्दत गर्दछ, र कम्पनीहरूले Mozenda प्रयोग गर्न सक्दछन् विभिन्न उत्पादनहरू सुरू गर्न र मार्केट गर्न।
Brand. ब्राण्ड जागरणका लागि राम्रो:
यदि तपाइँ एक ब्रान्ड शुरू गर्नुभएको छ वा तपाइँको उत्पादनहरु र इन्टरनेट मा सेवाहरु को प्रमोशन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ Mozenda प्रयोग गर्नु पर्छ। यो डाटा स्क्र्यापिंग सेवाको साथ, तपाईं सजिलै डेटा स collect्कलन गर्न सक्नुहुनेछ, धेरै प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न र तपाईंको कागजातहरूको गुणस्तर अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, यस उपकरणले बढि सीसा उत्पन्न गर्न र तपाईंको ब्रान्डलाई सोशल मिडियामा प्रभावकारी र प्रभावकारी ढ .्गले प्रचार गर्न मद्दत गर्दछ। छोटकरीमा, तपाईं यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर तपाईंको व्यापार बढ्न सक्नुहुनेछ र विश्वभरिका सम्भावित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।